दाङमा व्यवसायिक रुपमा ‘टर्की’ पालन सुरु (भिडियो सहित) « Farakkon
दाङमा व्यवसायिक रुपमा ‘टर्की’ पालन सुरु (भिडियो सहित)
दाङमा एकजना युवाले जिल्ला मै पहिलो पटक ‘टर्की’को व्यवसायीक पालन सुरु गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ निवासी २७ बर्षीय लेखनाथ बुढाथोकीले हाल झण्डै ६ सयको हाराहारीमा ‘टर्की’ पाल्दै जिल्ला मै नयाँ व्यवसाय सुरु गरेका छन् ।
घोराही ७ बेसाहीमा एक विगाह क्षेत्रफलको जमिन भाडामा लिएर झण्डै ४५ लाखको लगानीमा उनले यसरी टर्की र लोकल कुखुरा पाल्न थालेको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । केही नयाँ गरौं भन्ने उद्देश्यका साथ ‘कालिकादेवी पोल्ट्री फर्म’ को नाममा उद्योग दर्ता गरेर बुढाथोकीले जिल्लामा पहिलो पटक टर्कीको व्यवसायीइक पालन गरिरहेका छन् । युवा अवस्थामै बुढाथोकी यसरी कृषि कर्ममा लाग्नुको कारण भने उनको परिवारिक वातावरणले नै हो । उनका बुवाले कुखुरापालन गरेका छन् भने आमाले बाख्रा पालन गर्दै आएको बुढाथोकीले बताए ।
अध्यनपछि टर्की पाल्न सुरु
हाल उनको फर्ममा साना ठूला गरी टर्की मात्रै ६ सय बढी हुर्किरहेका छन् । तर, यो व्यवसाय गर्नु पूर्व भने बुढाथोकीले तीन बर्ष अघि आठवटा टर्कीको बच्चा तुलसीपुरमा लागेको व्यवसायीक मेलाबाट किनेर कसरी त्यसलाई हुर्काउने भन्ने अध्ययन गरेका रहेछन् । तुलसीपुरमा मेला हेर्न गएका बुढाथोकीले टर्की भन्ने नयाँ नामको पंक्षी देखेपछि प्रति बच्चालाई ५ सयको दरले ४ हजारमा किनेर घर ल्याए ।
उनले टर्कीलाई लोकल कुखुराजस्तै गरी पाल्न सम्भव छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरे । ‘उनीहरुको चालचलन हेरे बुझे, कस्तो खान्छन्, कस्तो वातावरणमा बस्न चाहन्छन् त्यो बीचमा मैले सबै बुझे’, बुढाथोकीले भने ‘अण्डापनि पा¥यो, बच्चा पनि निकाल्यो र मैले यिनीहरुलाई पनि लोकल कुखुराजस्तै गरी पाल्न सकिने निष्कर्षमा म पुगे’ बुढाथोकीले भने ।
टर्कीको बारेमा ९ महिना अध्ययन गरेपछि बल्ल आफूमा विश्वास पलाएको उनले बताए । त्यसका साथै उनले टर्कीको बारेमा स्वअध्ययन पनि गरे । अमेरिका लगाएका पश्चिमा मुलुकमा लोकप्रिय पंक्षी टर्कीको व्यवसायीक पालन गर्नु पूर्व उनले त्यसको बच्चा कहाँ पाइन्छ भन्ने खोजी गरे । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय झनेझैं उनले काठमाडौँ र चितवनमा टर्कीको व्यवसायीक पालन भएको पत्ता लगाए । उनी त्यहाँ पुगेर र त्यसको पनि अध्ययन गरे । कुखुराभन्दा आकारमा ठूलो पनि हुने, त्यसैगरी पाल्न पनि सकिने र महंगोमा पनि बिक्री हुने भएपछि उनी टर्की पाल्ने निर्णयमा पुगेको बुढाथोकीले बताए ।
त्यसपछि उनले काठमाडाँैवाट एकै पटकमा एकसय जति टर्कीको बच्चा किनेर ल्याएर जिल्लामा अरु भन्दा नौंलो जातको व्यवसायीक पालन सुरु गरे । अब भने बुढाथोकीको फर्ममा बच्चा पनि उत्पादन भइरहेका छन् । ‘अण्डादेखि बच्चा उत्पादनसमेत यही भइरहेको छ’ बुढाथोकीले भने ‘अब मंसिरको अन्तिमदेखि यहीबाट बच्चाको बिक्रि पनि सुरु गर्ने सोचमा छु ।’ उनले बच्चा जन्मे लगत्तै एउटा बच्चालाई साढे चार सयदेखि पाँच सयसम्ममा बेच्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।
उनको फर्ममा हाल मासुको लागि प्रसस्तै टर्की तयार भइसकेका छन् । उनले हालसम्म दुईवटा सिफ्ट टर्की बेचिसकेको बताए । दाङमा हालसम्म कतैपनि टर्कीको व्यवसायीक पालन नभएको हुँदा कुखुरापालक किसानलाई एकपटक यसमा लगानी गरेर हेर्न उनको सल्लाह छ । ‘टर्कीलाई कुखुराजस्तो रोग लाग्ने तथा मर्ने सम्भावना कम नै छ र यसको बजार पनि राम्रो छ ।’ बुढाथोकीले भने ।
टर्की कसरी पाल्न सकिन्छ ?
टर्कीको मासु जस्तोसुकै बिरामीका लागि पनि उपयुक्त मानिने दाबी बुढाथोकीले गरे । सुगर, युरिक एसिड, प्रेसर र फष्ट स्टेजका क्यान्सरका बिरामीले समेत टर्कीको मासु मज्जाले खान मिल्छ भन्ने कुरा आफूले अध्ययन गर्दा थाहा पाएको बुढाथोकीले बताए । ‘टर्कीको मासुले कसैलाई पनि असर नगर्ने हुँदा हरेक मानिसले खान मिल्ने खालको छ,’ बुढाथोकीले भने । टर्की पाल्नको लागि छुट्टै केही धेरै गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको बताएका उनले सामान्य रुपमा लोकल कुखुरा जस्तै गरी पाल्न सकिने बताए ।
‘टर्की सामान्य रुपमै, सामान्य हावापानी मै मज्जाले पाल्न सकिन्छ । त्यसको लागि अत्यधिक मेहनत गर्नुपर्दैन’ बुढाथोकीले भने । टर्कीले आफ्नो खानाको ७० प्रतिसत घाँस खाने भएको हुँदा ब्रोईलरलाई जस्तै दानापानीमा धेरै भार नपर्ने जानकारी दिए । ‘टर्कीको सबैभन्दा मनपर्ने खाना दुबो नै हो,’ बुढाथोकीले भने ‘ त्यसबाहेक मैले बर्थिम, मेथी, मकैचरी, नेपिएर लगाएका घाँस पनि लगाएको छु।’ टर्कीलाई घाँस उपलब्ध गराउनकै लागि उनले भाडामा लिएको जग्गामा घाँसखेती पनि गरेका छन् । कठ्ठाको दुई हजारका दरले जग्गा भाडामा लिएकार लेखनाथ बुढाथोकीले बार्षिक ३२ हजार जग्गाको भाडा तिर्दै आएको बताए ।
टर्की सामान्यतया ६ महिनामै बयस्क हुन्छ । त्यतिबेलादेखि नै उस्ले अण्डा दिन पनि थाल्छ । बीचमा ओथारो बस्न नदिने हो भने एक लटमा ९० वटासम्म अण्डा दिने गरेको बुढाथोकीले बताए । तर सामान्यतया २०÷२५ वटा अण्डामै माउ टर्की ओथारो बस्ने गरेको उनले जानकारी दिए । औषत आयु दुईदेखि चार बर्षसम्म रहने टर्की ६ महिनाको अन्तरमा ८ किलोसम्मको हुने गर्दछ । तर २ बर्ष जति पाल्दा एउटा टर्की १४ देखि १७ किलोसम्मको हुने बुढाथोकीले बताए । ‘मेरोमा १५ किलोसम्मको बेचेको छु’ उनले भने । उनले आफ्नो फर्मदेखि नै अण्डा, बच्चा तथा मासुको लागि टर्की बिक्री गर्दै आएको जानकारी दिए । जिउँदो टर्की प्रतिकिलो ८ सय र तयार पारिएको मासु प्रतिकिलो एक हजारमा बिक्री गर्ने गरेको बुढाथोकीले बताए ।
तर, उनले एउटा टर्की पनि फर्मबाट बाहिर बिक्रीका लागि लैजानु नपरेको तथा खोरबाटै टर्की पु¥याउन मुस्किल भइरहेको बताए । ‘बजारमा टर्कीको अत्यधिक माग छ,’ बुढाथोकीले भने ‘टर्की खोज्न आउने कतिपयलाई छैन भन्दै फर्काउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ सबैभन्दा बढी टर्कीको माग क्रिश्चियनहरुको महानपर्व क्रिसमसमा भएको उनले बताए । टर्कीलाई क्रिसमस बर्ड पनि भन्ने गरिएको उनले बताए । उनले आफ्नो फर्ममा हाल ६ सय टर्की र झन्डै १७ सय वटा लोकल कुखरा हुर्किरहेको जानकारी दिए ।
युवा स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न जान्नुपर्छ
बुढाथोकी नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ दाङ क्षेत्र नं. ३ का क्षेत्रीय सचिव समेत रहेका बुढाथोकीले राजनीति सँगसँगै व्यवसाय पनि गर्न जरुरी रहेको तर्क गरे । जिल्लामा शौखका निम्ति घरहरुमा फाट्टफुट्ट रुपमा टर्की पालेको देखिएको भएपनि यसरी व्यवसायिक रुपमा ‘टर्की’को व्यवसायिक पालन गर्ने बुढाथोकी पहिलो व्यक्ति हुनु ।
‘राजनीति गर्नेहरु स्वालम्बि र स्वाभिमानीपूर्वक निष्ठाको राजनीति गर्ने हो भने उसले त्यसको अलवा श्रमपनि गर्न आवश्यक छ’ बुढाथोकीले भने ‘अन्यथा राजनीति पेशा वन्ने खतरा रहन्छ ।’ उनले आफू संगठनको काममा जानुपर्दा आफूले पालेका टर्की र लोकल कुखुरा हेरचाहको लागि थप दुईजना मानिस पनि राखेको बताए । उनको परिवार पनि त्यसैको रेखदेखमा तल्लिन छन् । विविएस सम्मको अध्ययन गरेका बुढाथोकीले लाज नमानी कृषि कर्म गर्नसकेमा मनग्गै फाईदा गर्न सकिने सुझाए । ‘घर जग्गा बन्धक राखेर विदेश जाने सोच पाल्नुभन्दा त्यही पैंशाले स्वदेशमै केही नयाँ व्यवसाय गर्नु राम्रो हो’ बुढाथोकीले भने ।